Namoaka fitaovana iray ahafahana mandrefy isan-taona ny fivoaran’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara ny Transparency International – Initiative Madagascar - Transparency International - Initiative Madagascar
Namoaka fitaovana iray ahafahana mandrefy isan-taona ny fivoaran’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara ny Transparency International – Initiative Madagascar
Nivoaka ny 20 Febroary 2020 ao amin'ny ,
Nanomboka tamin’ny taona 2019 ny Transparency International – Initiative Madagascar (TI-MG) no niady amin’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana tamin’ny alalan’ny tetikasa Tsaboy ny Gasy, izay vatsian’ny vondrona Erôpeanina vola. Maro ny dingana efa nolalovana, anisan’izany fanatanterahana fanadihadihana ho famantarana ny fisehon’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, ny fanantontosana sy ny fanapariahana ny horonantsary fanadihadihana mitondra n,y lohateny hoe « vola sa aina », ary ny adi-sisika entina hamongorana ny kolikoly eo amin’ity tontolo ity. Namolavola fitaovana iray fanampiny amin’izany ny TI-MG ka naseho ampahibemaso izany androany teto amin’ny Carlton Anosy : « B-CORSAN – Baromètre de la Corruption dans le domaine de la santé » na ny fitaovam-bandrefesan’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana.
Mizara ho lafiny roa ny « B-CORSAN » : natokana hanehoan’ny mpampiasa ny toeram-pitsaboana ny heviny ny iray, ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana kosa ny iray. Ankoatra ireo, misy fitaovana roa ihany koa izay novolavolaina mba hahafahana manao fanombanana ny rafitry ny tontolon’ny fahasalamana, araka ny hevitr’ireo sokajin’olona roa ireo. Io fitaovana io dia natao mba ho isan’ny fitaovanam-pandrefesana voalohany ny fivoaran’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara amin’ny fomba mitohy. Tokony hampiasaina mba ho fankasitrahana sy hahitana mivantana ny ezaka ataon’ny Fanjakana amin’ny ady amin’ny kolikoly sy ny mba hahafahan’ny daholobe misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy ity. Ahafahana ihany koa mahita ny hatsaran’ny fitantanana sy ny fangaraharana eo amin’ny sehatry ny fahasalamana ity fitaovana ity.
Ity fitaovam-pandrefesana ity dia manohana ny adisisika ataon’ny TI-MG ho entina miady amin’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana. Raha natao hanairana ny mpanapa-kevitra ambony ny amin’ny amin’ny halalin’ny kolikoly sy ny fihenan’ny kalitaon’ny fitsaboana eto Madagasikara ny nanatanterahana ny fanadihadihana sy ny namoahana horonantsary dia entina hampandroso kosa ny hetsika izay ataony hiadiana amin’ny kolikoly ho an’ny amin’ny tsaratsara kokoa ity indray mitoraka ity.
Arak’izany, manao antso avo amin’ny Mpitondra firenena ny TI-MG mba hanohanany ny fampiasana ity fitaovana ity, amin’ny alalan’ny fampidirana azy ao amin’ny tetika hiadiana ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Miantso ihany koa ireo mpiara-miombona antoka sy ireo mpiara-dia aminy ny TI-MG mba hiara-misalahy amin’ity ady ity amin’ny alalan’ny fanentanana ny fampiasana ity fitaovana ity ao amin’ny fandaharan’asany ho fanatsarana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Farany, mampirisika ny olompirenena sy ireo mpampiasa ny toeram-pitsaboana, ary ny mpiasan’ny fahasalamana izahay mba ho sahy hanameloka ny kolikoly ka hanaiky handray anjara amin’ny fampiharana tsy tapaka ny « B-CORSAN » (kasaina ho havaozina isan-taona), ary ho sahy hanao TSIA ny kolikoly isan’andro.
Anosy, ny faha-20 febroary 2020